Niyad-jabsanaan | Suomen Mielenterveysseura
Tuomas wuxuu dareemayey dhowrkii sano ee la soo dhaafay caajis. Dhaqida alaabta, karinta cuntada iyo inuu xataa ka soo kaco sariirta ayaa ahaa kuwo aan u fududeyn oo caajis iyo culeys ku ah. Iskuulka dugsiga sare ka dib Toumas ma helin waxbarasho kale, labadii sano ee la soo dhaafay marna wuu shaqeynayey marna guriga ayuu joogay oo shaqo la’aan ayuu ahaa. Waxaa hoos u dhacay dareenkiisa inuu wax xiiseeyo ama qabto.
Tuomas muxuu qaban karaa?
Tuomas waxaa laga yaabaa inuu hayo niyad-jab kaas o o calaamadihiisu ay yihiin damac la’aan, daal culus, murugo iyo danqasho uu wax dhibsanayo. Waxaa kale oo calaamadaha niyad-jabka ee dhalinyarada ka mid ah xanaaq badan. Qofka niyad-jabku hayo wuxuu dareemayaa in waxna uusan u samayneyn farxad, waxaana ku adkaata inuu wuxuun xooga saaro.
Tuomas wuxuu la xidhiidhayaa dhakhtarka xarunta caafimaadka, si haddii loo baahdo dawooyinka niyad-jabka loogu qoro. Xarunta caafimaadka wuxuu ka helayaa akhbaar la xidhiidha kaalmooyinka wada hadalka ku qotoma ee loo fidiyo dadka uu hayo niyad-jabku si loo baxnaaniyo. Intaas waxaa dheer in bishiiba mar uu la kulmo kalkaaliyaha caafimaadka maskaxda. Tuomas wuxuu kale oo ogaaday in Xarunta Caafimaadka Maskaxda (Mielenterveyden keskusliitto) laga helo tasiilaadka la talinta ah oo loo fidiyo dadka niyad-jabku hayo. Haddii uu niyad-jabku sii socdo, Tuomas wuxuu la xidhiidhi doonaa xarunta caafimaadka maskaxda.
Dhakhtarku wuxuu u soo jeedinayaa Tuomas inuu sameeyo jimicsi ama isboorti sidoo kale inuu yareeyo isticmaalka maandooriyeyaasha. Tuomas way ku adkeyd inuu sameeyo wax isboorti ah, waase muhiim in wuxuun isboorti ah la sameeyo todobaadka dareenka maskaxdana kor ayey u soo qaadaa.
Marka ay muuqato waxtarka dawadu, Tuomas wuxuu bilaabayaa inuu raadsado waxbarasho. Marka hore wuxuu raadsanayaa meelaha dhalinyarada lagu shaqaaleeyo ee deeggaankiisa kadibna tababarka wax ku barashada shaqada. Wuxuu ka helay caawin waxtar u leh wuxuu rabo inuu barto la taliyaha xirfadaha ee xafiiska shaqada. Tuomas wuxuu kaloo akhbaar ka raadsaday opintoluotsia hagaha waxbarashada si uu u helo xirfada uu rabo.
Xiligga uu ku jiro waxbarashada Tuomas wuxuu baranayaa dad cusub, taasna qayb ayey ka qaadaneysaa in dareenkiisu soo kobco. Sidoo kale wuxuu weli sii wadaa inuu la kulmo kalkaaliyaha caafimaadka maskaxda dawadana wuxuu iska dhaafi doonaa marka uu arintaas dhakhtarka la talin kala yeesho.